नेपाली मेनपावरलाई लाखौ रुपैया तिरेर कतार आएका नेपाली छोरी चेलीहरुको हालत यस्तो सम्म हुदो रहेछ ! उनीहरु बसेको कोठा मै आएर जिउमा हात लगाउने देखि चप्पल फुकालेर हान्ने सम्म देखियो (भिडियो हेर्नुहोस) « Sajha Page
नेपाली मेनपावरलाई लाखौ रुपैया तिरेर कतार आएका नेपाली छोरी चेलीहरुको हालत यस्तो सम्म हुदो रहेछ ! उनीहरु बसेको कोठा मै आएर जिउमा हात लगाउने देखि चप्पल फुकालेर हान्ने सम्म देखियो (भिडियो हेर्नुहोस)
साझापेज । नेपालीहरुको रोजगारको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा रहेको खाडी मुलुक मध्य एक कतार पनि हो । निक्कै सानो देश भए पनि त्यहाँ लाखौको संख्यामा नेपालीहरु कार्यरत रहेका छन । त्यस मध्ये केहि नेपाली महिलाहरु पनि घरेलु कामदारको रुपमा त्यहा पुग्ने गरेका छन् । बेलाबेला खबरमा सुनिए अनुसार बिदेशी भूमिमा महिलाहरुको त्यति सुरक्षा हुन्न भन्ने बुझिन्छ । तर आज एउटा भिडियोले त्यो चरितार्थ पारेको छ । बिदेशी भूमिमा र त्यस मध्य पनि खाडी मुलुकमा महिला कामदारलाई त्यति सुरक्षा नहुने रहेछ ।
लाखौ रुपैया नेपाली मेनपावरलाई बुझाएर मिठा सपना बुन्दै कतार आइपुगेका एक हुल महिलाको दु:ख दुधको दुध पानीको पानी यो एउटा भिडियो हेर्दा छर्लंग भएको छ । कतार पुगेका उनीहरुलाई काममा लान आधिकारिक मान्छे लिन नआएर कुनै एक दलाल आइपुग्छ र बिना सम्झौता बलजबर्जस्ति लान खोज्छ । तर नपाली युवतीहरु मान्दैनन त्यसपछि उसले जवर्जस्ती गर्छ । कुराकानी कै क्रममा ति अरबी दलालले महिलालाई हात लगाउछ र चप्पलले पनि हान्छ । सबै दृश्य देख्दा धेरै दुख लाग्दछ । बाकी तलको भिडियोमा :